चाहेको ठाउँमा तात्ने अचम्मको रोबोट, यसले अब मान्छेले चाहेको ‘सम्पूर्ण यौन आनन्द’ दिने ! - Arghakhanchi Saptahik
चाहेको ठाउँमा तात्ने अचम्मको रोबोट, यसले अब मान्छेले चाहेको ‘सम्पूर्ण यौन आनन्द’ दिने ! चाहेको ठाउँमा तात्ने अचम्मको रोबोट, यसले अब मान्छेले चाहेको ‘सम्पूर्ण यौन आनन्द’ दिने ! Slider
नेपालमा सेक्स डलको
प्रयोग बाहिर आउने विषय भएन किनको हाम्रो समाज ‘लुकेको समाज’ हो । पश्चिमा
समाजमा भने मान्छेहरू हामीभन्दा अल्लि खुलस्त छन् उनीहरू मान्छेसँगको संगतभन्दा बढी काल्पनिक संसारमा बढी रमाउँछन् । सम्भवतः सोही कारणले उनीहरूकोमा पुरुष र महिलाहरूका लागि सेक्स खेलौना र रोबोट सेक्स पार्टनर पनि बनिसकेका छन् ।
पछिल्लो पटक दिइएको जानकारी अनुसार अब सेक्स रोबोटमा पनि चाहिएको स्थानमा तातोपना मिल्ने गरी बनाउन लागिएको बताइएको छ ।
अब सेक्स रोबर्टहरूले पनि मान्छेले जत्तिकै यौनआनन्द दिने सम्भावना बढ्दै गएको छ । यसो हुन गएमा सम्भवतः अर्को मानवदेखि वाक्कदिक्क तर यौन जीवन वर्वाद भएकाहरूको जीवनमा नयाँ बहार आउने देखिन्छ ।‘रोबर्ट फर्म, रियलडल’ का मालिक म्याट म्याक मुलनका अनुसार यस्ता रोबर्टहरूका कारण ‘सम्बन्ध झनै बलियो’ हुनेछ । रोबटका खास खास ठाउँ, जहाँ यौनजनित क्रियाकलाप
हुन्छन् , त्यहाँ तातो दिइने तयारी त छ तर यही नै प्रविधि अपनाउने भन्ने विषयमा भने तय भइसकेको छैन । जे होस्, एक दुई वर्षमै यस्तो रोबर्ट आउनेछ, जोसँग यौनसम्पर्क गर्दा रोबटको पनि शरीर मान्छेको जस्तै भनेको ठाउँमा तात्नेछ ।